အိမ်ထောင်ပြုတာထက် ကလေးလိုချင်တာပါလို့ ဆိုခဲ့တဲ့ အေးမြတ်သူ | Buzzy
အိမ်ထောင်ပြုတာထက် ကလေးလိုချင်တာပါလို့ ဆိုခဲ့တဲ့ အေးမြတ်သူ
သူမအလိုရှိတဲ့ အမျိုးသားပုံစံကိုလည်း ပြောထားပါတယ်
နိုင်ငံကျော် ပရိသတ်အချစ်တော် အေးမြတ်သူတစ်ယောက် People မဂ္ဂဇင်းနဲ့ အင်တာဗျူးမှာ သူမရဲ. ဘဝအဖော်မွန်မှာ ရုပ်ချောဖို့ မလိုပဲ သူမအပေါ် သည်းခံနိုင်ပြီး လေးစားစရာကောင်းတဲ့ ယောင်္ကျားမျိုး ဖြစ်ရင် အဆင်ပြေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နိုငျငံကြျော ပရိသတျအခဈြတျော အေးမွတျသူတဈယောကျ People မဂ်ဂဇငျးနဲ့ အငျတာဗြူးမှာ သူမရဲ. ဘဝအဖျောမှနျမှာ ရုပျခြောဖို့ မလိုပဲ သူမအပျေါ သညျးခံနိုငျပွီး လေးစားစရာကောငျးတဲ့ ယောကငြ်ျားမြိုး ဖွဈရငျ အဆငျပွတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ဒါ့အပြင်သူကမ အိမ်ထောင်ပြုချင်တာထက် ကလေးလိုချင်တာက ပိုကြောင်းနဲ့ ကလေးလည်း အရမ်းချစ်တက်ကြောင်း ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပွငျသူကမ အိမျထောငျပွုခငျြတာထကျ ကလေးလိုခငျြတာက ပိုကွောငျးနဲ့ ကလေးလညျး အရမျးခဈြတကျကွောငျး ဆိုခဲ့ပါတယျ။
တစ်နေ့ အိမ်ထောင်ကျလို့ ကလေးမွေးဖွားတဲ့အခါ အဆင်ပြေအောင် တစ်နေ့ကို နှစ်နာရီ GYM ကစားပြီး ခန္တာကိုယ်အချိုးအစားကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တဈနေ့ အိမျထောငျကလြို့ ကလေးမှေးဖှားတဲ့အခါ အဆငျပွအေောငျ တဈနကေို့ နှဈနာရီ GYM ကစားပွီး ခန်တာကိုယျအခြိုးအစားကို ပွုပွငျထိနျးသိမျးနတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။
Source & Photo : People